Wasiirka Maaliyadda iyo Arrimaha Gudaha oo Laanta Socdaalka ku yeeshay kulan |
Wasiirka Maaliyadda iyo Arrimaha Gudaha oo Laanta Socdaalka ku yeeshay kulan
Hargeysa(GNN) Wasiiradda wasaaradaha Maaliyada Samsam Cabdi Aadan iyo Wasiirka wasaaradda Arrimaha gudaha Cali Warancade ayaa kulan doraad ku yeeshay Xarunta Laanta Socdaalka Somaliland, halkaas oo ay labada wasaaradood ku soo saaraan Baasaaboorka Somaliland.
Kulanka labada wasiir ayaa la xidhiidha cabashooyin ka soo yeedhaya dadweynaha doonaya inay qaataan baasaaboor Somaliland-ka , kuwas oo maalmahan ka cabanayey qaabka ay u helaan, inkasta oo aan la ogayn ujeedada rasmiga ah ee labada wasiir inay arrintaas la xidhiidho iyo inkale.
Wasaaradaha arrimaha Gudaha iyo Maaliyadda ayaa midkood ba door ku leeyahay Baasaaboorka, tusaale ahaan dhaqaalaha baasaaboorka ka soo baxa iyo Maal-galintiisa ba waxa iska leh wasaaradda Maaliyadda oo sanadkii hore kala wareegtay Baanka Dhexe, halka wasaaradda Arrimaha guduhuna ay bixintiisa iyo shuruudaha lagu bixiyo ka masuul tahay.
Inkasta oo ay dhawr jeer dhacday inay caqabado koobani saameeyeen bixinta baasaaboorka, hase yeeshee waa la xaliyey, balse maalmahan waxa soo baxaya cabashooyin, kuwaas oo la filayo labada wasaaradood iyo labadooda wasiir ba inay ka kulmeen sidii looga bixi lahaa, dadweynuhuna u heli lahaayeen Baasaaboorada ay dalbanayaan.
Wasiirka Arrimaha gudaha Somaliland ayaa dhawaan xabsiga dhigay Taliye ku-xigeenka Laanta Socdaalka, kaasoo xafiiska uga maqan shaqo ka joojin lagu sameeyey, waxaana la filayaa in khilaafka soo kala dhex galay isaga iyo Warancade inay sabab u yihiin cabashooyinka soo baxaya , kuwaas oo aad loo hadal hayo inay la xidhiidho dhaqaalaha ay ka helaan baasaaboorada ay bixiyaan.
Baasaaboor Somaliland-ka ayuu isticmaalkiisu aad u sareeyaa, waxaana jira baahiyo kala duwan oo dadweynaha isticmaalayaa ay u qabaan, kuwaas oo intooda badan u isticmaala inay ugu safraan dalka Itoobiya oo si rasmi ah u ogol in lagu galo.